မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားသို့ ဆန်တင်ပို့မှု ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက် - Xinhua News Agency
မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားသို့ ဆန်တင်ပို့မှု ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြား ဆန်တင်ပို့မှုသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူ လယ်သမား အသင်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး အသင်း၏ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက ပြောကြားသည်။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်းတွင် နိုင်ငံခြား ဆန်တင်ပို့မှု စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၁ . ၇ သန်းရှိခဲ့ပြီး တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၄၅ သန်း နီးပါး ရှိခဲ့သည်။
လက်ရှိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားသို့ ဆန်တန်ချိန် ၂ သန်းကျော် တင်ပို့နိုင်ရန် မျှော်မှန်း ထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆန်အများဆုံး တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံသည် ဆန်တင်ပို့မှု ပိတ်ထားသော်လည်း ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ ်အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံထံမှ ဆန်တန်ချိန် ၁ . ၁ သန်းကျော် ဝယ်ယူ ခဲ့ကြောင်း ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး အသင်းမှ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆန် တင်သွင်းမှု တရားဝင် ဖြစ်စေ ရေးအတွက် တရုတ် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားဝင် တင်ပို့မှုများ စတင်လျှင် ယခုထက် ဆန်တင်ပို့မှု ရာခိုင်နှုန်းပိုမို တိုးလာနိုင်ကြောင်း ဆန်ကုန်သည်များက ဆိုသည်။
အများပိုင် ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်သည့် MAPCO (Myanmar Agribusiness Public Corporation) သည် မေလ အတွင်းမှ စတင်ပြီး တရုတ် နိုင်ငံသို့ ဆန်တန်ချိန် ၃၀ဝ၀ ကို တရားဝင် တင်ပို့မည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ၌ တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် အာရှ၊ ဥရောပနှင့် အာဖရိက နိုင်ငံများ အပါအဝင် ဆန်တင်ပို့ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း နိုင်ငံ ၆၄ ခုသို့ ဆန်တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ထံမှ သိရှိရသည်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားဆန်တင်ပို့မှုက တန်ချိန် ၁ . ၂ သန်းခန့် ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်းက တန်ချိန် ၁ . ၄၇ သန်း ရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြား ဆန်တင် ပို့မှု တန်ချိန် ၄ သန်းအထိ ရှိလာရန် အစိုးရက မျှော်မှန်းထားသည်။ (Xinhua)
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံ အကူအညီပေးမည်
အိမ်ခြံမြေ အခွန်လျှော့ချ၊ သိန်း ၅,၀၀၀ အောက်တချိုု့ အရောင်းပြန်ရှိလာ